Hey’adda degmooyinka iyo goboladda: Si deg deg ah guryo ha loogu dhiso soo galootiga | Somaliska
Hey’adda degmooyinka iyo goboladda: Si deg deg ah guryo ha loogu dhiso soo galootiga
Hey’adda degmooyinka iyo goboladda dalka Iswiidhan ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano SKL, ayaa aamisan in dowladda eeysan dar dargelin guryo dejinta soo galootiga ku cusub Iswiidhan.
Idaacadda wararka Iswiidhan u faafisay ayaa kal hore sheegtay in dowladdu suuragal ka dhigeeyso dhisida guryo kumeel gaar ah ama kuwa guur guura la dejiyo soo galootiga kuwaasoo weliba sharuudaha laga qafiifinayo.
“Waxaan ka wel welsanahay waa in isbadalka dowladda ee dhisida guryaha in laga dhigo bilaha dambe ee sanadka soo socda. Waxaan ula jeeda in isbadalkaan lugu dhaqaaqo sanadkan” ayuu yiri Jan-Ove Östbrink, oo ah qabiir dhinaca guryaha u qaabilsan SKL.
Degmooyin badan oo dalka ka mid ah ayaa doonaya in soo galootiga loo dhiso guryo ku meel gaar ah, saas oo ay tahayna waxaa gobolka Göteborg lugu eedeyey inuu hakiyey guryihii ku meel gaarka ah ee uu balan qaaday inuu u dhisayo soo galootiga. Mana ahan gobolka Göteborg oo keliya ee hakad geliyey guryahii la dhisayey ee waa mid hadda wadanka oo dhan ka jira, sidaas daraadeedna ay degmooyinka iyo gobolku ku baaqayaan in la dhiso guryo 15 sanno iyo ka badan jiri kara.
Jan-Ove Östbrink, wuxuu sheegay qaar ka mid ah xubnaha urrurka SKL ineey ay doonayaan in si qasab ah xal loo gaaro. Horey ayaa loogu dhaqaaqay dhisida guryo ku meel gaar ah oo loo arkayey xal ku haboon soo galootiga hase ahaatee ay hakad ku yimid. Taasina waxaa ay keentay buu yiri in la yirhaado hala dejiyo hoteelada kmg ah, goobaha jimcsiga lugu dheelo, degmooyinkuna uma arkaan arrintaasi xal wanagasan.
Tan iyo intii Iswiidhan ay ku soo qul quleen qaxooti aad u farro badan waxaa soo baxayey qeylo dhaan dhinaca guryaha ka heeysta qeybo ka mid ah dalka. Waxaana jiray da daalo ay dowladu sameeysay oo ku dooneeyso in la dhiso guryo ku meel gaar ah iyo teendhooyin la dejiyey qaxootiguu ugu horeeyey ee sanadkii hore dalkaan soo gaaray.
Booliska Göteborg oo gacan siinaya Stockholm ka dib dilal soo laa laabtay oo gil gilay magaaladda
Dad badan oo iska ilaabay canshuur celinta
Noorweey haweeneey soomaali ah ayaa iska soo tuurtay dabaq ku yaala xaafadda Grønland